Ciidamada Bad baado Qaran oo la wareegay qeybo ka mid ah Degmada Karaan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamada Bad baado Qaran oo la wareegay qeybo ka mid ah Degmada...
Ciidamada Bad baado Qaran oo la wareegay qeybo ka mid ah Degmada Karaan
Ciidamada Gadoodsan ee kasoo horjeeday Mudo kordhinta lana magac baxay (Xaq Udirir) ayaa la wareegay xarunta Iskuulka Maxamuud Axmed Cali ee Degmada Kaaraan , halkaasi oo ay ka sameysanayaan Fadhiisin Cusub .
Ciidankaan ayaa xalay saqdii dhexe gaaray xarunta iskuulka oo ah goob bur bursan balse banooni lagu ciyaaro , waxaana saakay ay ka samaysanayaan dhufeesyo sida ay ila wadaageen qar kamid ah dadka deegaanka .
Xarunta iskuul Maxamuud Axmed ayaa soo martay marxalado kala duwan xiliyadii dagalada burburkii kadib oo ay fadhiisin siyaabo kala uga dhiganayeen ciidamada ,gaar ahaan waxaa si wayn loogu xasuustaa xiligii ay itoobiyaanka muqdisho joogeen oo ay talis ciidan u ahayd halkaasi.
Ciidankaan la wareegay iskuulka Maxamuud Axmed Cali ayaa kasoo baxay furimaha dagaalka ee gobalka Shabeelaha dhexe.
Previous articleMasuulka Dowlada Qadar wadahadalada Soomalida oo kulan la qaatay Midoowga Musharaxiinta
Next articleHaweeney si weyn uga guulaysatay ra’iisal wasaaraha dalka Hindiya ee Modi
Midowga Afrika ayaa cambaareeyay rabshadaha ka socda Koonfur Afrika oo ay ku dhinteen 72 qof. Dibadbaxyada looga soo horjeedo xariga madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa...
Shimbir 150 Sano la,la,aa oo haatan dib loo heley.
Madaxweyne Trump oo ka hadlay Xil ka qaadista lagu sameeyey
Xagee ku Dambeeyey Kursigii Aqalka Sare.(SENATORKA) Beesha Harti ...
Boqolaal ka mid ah mudaaharaadayaasha Myanmar oo lagu xannibay gudaha hal...